အတွေးအမြင်/သုံးသပ်ချက် Archives | Page 42 of 48 | Frontier Myanmar
ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ နောက်တစ်ကြိမ် အာဏာ ပြန်ရနိုင်သေးသလား
စည်သူအောင်မြင့် ရေးသားသည်။ ၂၀၁၅ နိုဝင်ဘာ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အရှုံးကြီး ရှုံးခဲ့တဲ့ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဟာ အစိုးရသစ် မတက်ခင် ကာလအထိ နှုတ်ဆိတ်နေခဲ့ပြီး အခုတော့ ပါတီ လှုပ်ရှားမှု သတင်းတွေ ပြန်ထွက်ပေါ်လာပါပြီ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီ ၂၂ ရက်က ပါတီဥက္ကဋ္ဌ သမ္မတဟောင်း ဦးသိန်းစိန် နေပြည်တော်.
အစိုးရသစ်အတွက် အရေးအကြီးဆုံး စိန်ခေါ်မှု သုံးခု
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့အား ၂၀၁၅ ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက်က နေပြည်တော်၌ တွေ့ဆုံနွေးအပြီး တွေ့ရစဉ်။ ဓာတ်ပုံ – ဖြိုးဟိန်းကျော်/အေအက်ဖ်ပီ အင်န်အယ်လ်ဒီ အစိုးရဟာ နိုင်ငံတော်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်တွေ အောင်မြင်ဖို့ရာ စိန်ခေါ်မှု သုံးခုကို မလွဲမသွေ ရင်ဆိုင်ရဖို့ရှိပြီး အဲသည် စိမ်ခေါ်မှုအားလုံးဟာလည်း.
ဖွဲ့စည်းပုံ ခုံရုံးအသစ်၊ ကံကြမ္မာဆိုး ကြုံနိုင်သေးလား
လက်ရှိ လွှတ်တော်ထဲ ရောက်နေတဲ့ အင်န်အယ်လ်ဒီ အမတ်တွေနဲ့ အစိုးရအဖွဲ့အကြား အရင် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီတုန်းကလို ဂိုဏ်းကွဲတာမျိုး မရှိဘဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဦးဆောင်မှုအောက်မှာ ညီညီညွတ်ညွတ် ရှိနေတာမို့ ဒီ ခုံရုံးကို ပျက်စီးရာ ပျက်စီးကြောင်း လုပ်မယ့် အခြေအနေမျိုးလည်း မပေါ်ပေါက်နိုင်ပါဘူး။ စည်သူအောင်မြင့် ရေးသားသည်။ အခုဆိုရင် ပြည်ထောင်စု.